Mila hahitsy avokoa ireo lesoka rehetra nisy tamin`ireo fifidianana nifanesy teto amin`ny firenena toy ny lisi-pifidianana, fitanilana nataon`ny mpikambana ao anatin`ireo birao fandatsaham-bato … Fantatra fa fifidianana roa no atao ao anaty biraom-pifidianana iray, saingy tsy misy fiovana ny isan`ireo mpikambana ao anatiny. Tokony hohamafisana ny fampiofanana omena an`ireo mpikambana ao anatin`ireo birao fandatsaham-bato hisorohana ny tandrevaka. Ny CENI aza niaiky ny fitanilana nataon`ny mpikambana ao anatin`ireo birao fandatsaham-bato sasany tamin`ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Raha mitombina ny tsy fanarahan-dalàna dia mila raisina ny fepetra na ara-pitondrana na ara-panjakana na fanasaziana araka ny lalàna ary harahina eo anivon`ny Fitsarana. Marihina fa hiantohan`ny fanjakana Malagasy tanteraka ny vola lany rehetra amin`ny fifidianana fa tsy hisy fanampiana avy any ivelany na fikitihana ny kitapom-bolan`ny SACEM izay tantanan`ny Vondrona iraisam-pirenena. Tsy mbola voafaritra ny tetibola kanefa efa natolotra tany amin`ny governemanta ny 24 jona lasa teo ny volavolana tetibola hanatontosana ity fifidianana ity.